Accueil > Gazetin'ny nosy > Toamasina : Teratany vahiny tsy maty manota
Isan’ny tranga mpiseho eto amintsika ny fisian’ny vahiny mihevi-tena ho ambonin’ny lalàna eto Madagasikara. Manomboka amin’ny fitondran-tena mamoa-fady izay manosihosy ny kolotsaina Malagasy, ka hatramin’ny heloka bevava toy ny famonoana olona na fanodinkodinana sy hosoka na fisolokiana volabe an’aliny tapitrisa…
Raha manipika ny afitsoky ny teratany vahiny amin’ny tranga toa izany izahay dia tsy milaza hoe “anjely avokoa ny Malagasy”. Tsia. Ny tianay hivoitra dia mampikolay ny rehetra ny fiheveran-tena ho tsy maty manota ataon’ny teratany vahiny maro eto. Toa ao am-paosiny avokoa na voavidiny vola avokoa ny tompon’andraiki-panjakana isan’ambaratonga eto.
Any Toamasina any, ohatra, dia misy teratany vahiny tena mampiteny ny moana ny raharaha maloto ataony amin’ny resaka tany. Tsy izy mivantana no mirotsaka an-tsehatra mikarakara ny antontan-taratasy fa Malagasy no irahiny. Matetika dia mpiasa na mpanampy azy ao an-tranony no ampanaoviny ilay raharaha maloto. Izy no mibaiko sy mametraka ny tetika maloto rehetra ary mampiasa vola izy mba hampahomby izany. Rehefa tsy vita hatramin’ny farany ny tetika dia naman’ny madiodio ilay karana fa raha mahomby dia afindran’ilay “Malagasy saribakoliny” aminy ny fizaka-manana an’ilay tany.
Momba io raharahan-tany io anefa dia hosoka sy asa fisolokiana no maro. Ity teratany vahiny iray ity izao dia misy antontan-taratasy efa ho 80 samihafa no nanaovany raharaha maloto, ary voavidiny ny polisy sasany, ny dokotera mpitsabo sasany, ny sasany tao amin’ny fitsarana tao Toamasina tao…
Raha ny re dia mahavita manao raharaha maloto hatraty Antananarivo aty izy io, ka ohatra amin’izany ny tsikombakomba nataony tao amin’ny Fiantohana Ny Havana tao. Re koa fa voasaringotra tamin’ilay raharaha fakana takalon’aina an-keriny (kidnapping) an’ireo Malagasy mianadahy (Arnaud sy Annie) io teratany vahiny io. Maro ny manam-pahefana ara-panjakana ambony nifandimby teto no mahafantatra ny tantara momba an’io vahiny io fa samy minia mangina… asa, voatampi-maso avokoa ve sa takon’ny vola ny marina ?